Ruzivo Kuwedzererwa kuri Kukuvadza Kugadzira | Martech Zone
China, Kukadzi 2, 2012 China, Kukadzi 2, 2012 Douglas Karr
Rudo chairwo iyi blog post uye infographic kubva kushamwari Jascha Kaykas-Wolff. Jascha anga ari wenguva yakareba shamwari uye Mindjet ikozvino mutengi wedu (uye munguva pfupi iri kuzotsigira blog!). Mindjet iri kutungamira indasitiri mukugadzira chikuva chisinga regedze iwe mepu mazano ako, asi chaizvo kusanganisa uye kuita zviito uye chaiyo-nguva yekutarisa.
Asi sekuziva kwedu tese, haingori vhoriyamu yeruzivo iyo yakura, asi zvakare kumhanya kwainoendeswa. Mapepa emangwanani nemanheru vakapa nzira kutenderera kwenhau uko nyaya dzinopaza nhepfenyuro dzekutepfenyura uye zvitoro zvepamhepo mumaminetsi mashoma, zvichisiya kunyange tambo nhau kumashure. Tasvika padanho iro nzira idzo dzinoburitswa nenhau neruzivo dzinenge dzisina muganho: email matsamba, rarama zvirimo online, web cams, kugara uchingobuda, kutumira mameseji, RSS feeds, Twitter, nezvimwe.
Uku kuputika kwemashoko aripo akaitwa kuti agoneke neInternet kunoshamisa. Asi hachisi chokwadi kuti izvi zvese zvinotungamira mukuita zvirinani. Muchokwadi, munzira dzakawanda iyi mafashama emvura inogadzira mhedzisiro inopesana.
Uku hakusi kungoziva chete, zvakare iko kutaura kwedu. Sezvo isu tichishanda pamwe neakawanda uye akawanda madhipatimendi ekushambadzira, isu tiri kutsvaga yakafanana tambo iri kuongorora kuora mitezo… Izwi rekare iro riri mupenyu uye rakanaka kana zvasvika mukutaura kwemazuva ano nekutaurirana. Tiri kutarisa kutarisa munzvimbo dzinowanikwa data, asi kwete izvo zvinokanganisa mutsetse wekambani.
Zadzisa mufananidzo kubva JESS3.
Feb 3, 2012 at 7:43 PM
yakanaka posvo Mr. Karr .. 🙂